नि: शुल्क YouTube सदस्यहरू | नि: शुल्क YouTube मनपर्नेहरू
के तपाईं नि: शुल्क YouTube सदस्यताहरू र नि: शुल्क YouTube लाइकहरू चाहनुहुन्छ?
के तपाइँ तपाइँको YouTube भिडियोमा अधिक सदस्यहरू र मनपर्दो इच्छुक हुनुहुन्छ? लगईन गर्न र सुरू गर्नको लागि तपाईंको युट्यूब च्यानल यूआरएल प्रविष्ट गर्नुहोस्!
अब नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यहरु पाउनुहोस्! or YouTube सदस्यहरू खरिद गर्नुहोस्
यूट्यूबका नि: शुल्क ग्राहकहरू प्राप्त गर्नुहोस्, वा हाम्रो प्रीमियम सदस्यताहरू, हेराईहरू र द्रुत बृद्धिका लागि मनपराउने प्रयास गर्नुहोस्!
साइन अप र लगईन
साइन अप र लग इन गर्न seconds० सेकेन्ड लाग्छ!
एक योजना सक्रिय गर्नुहोस्
हाम्रो अत्यधिक लोकप्रिय र प्रभावी नि: शुल्क योजना सक्रिय गर्नुहोस्, वा सशुल्क योजना कोशिस गर्नुहोस्।
तपाईंको च्यानल ग्रो हेर्नुहोस्
तपाईंको च्यानलको सदस्यताहरू र भिडियो मनपर्दो हेर्नुहोस्!
नि: शुल्क र भुक्तान योजनाहरू
टेलर्ड योजनाहरू र मूल्य निर्धारण तपाईंको आवश्यकता अनुसार
नि: शुल्क सदा!
१२ घण्टामा १० सदस्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्
सदस्यहरू कम प्रतिधारण छन्
तपाइँ सब्सक्राइब र6भिडियो मनपर्छ
तपाईंले म्यानुअल रूपमा योजना सक्रिय पार्नुभयो
1x प्रत्येक 12 घण्टा सक्रिय गर्नुहोस्
ग्राहक गणना सार्वजनिक हुनुपर्दछ
1+ भिडियो पोष्ट गरेको हुनुपर्दछ
कुनै पनि समयमा प्रयोग रोक्नुहोस्!
अब सक्रिय गर्नुहोस्
प्रो टु प्रो
प्रत्येक दिन १०-१-10 सदस्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्!
सदस्यहरू उच्च प्रतिधारण छन्
तपाइँ सब्सक्राइब र0भिडियो मनपर्छ
योजना 100% स्वचालित हो
हरेक दिन आफैले सक्रिय गर्दछ
कुनै पनि समयमा रद्द गर्नुहोस्!
प्रत्येक दिन १०-१-20 सदस्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्!
प्रत्येक दिन १०-१-40 सदस्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्!
15 तरिका तपाइँको व्यापार को लागी अधिक नि: शुल्क यूट्यूब ग्राहकहरु प्राप्त गर्न को लागी
के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि त्यहाँ लगभग 1.86 अरब यूट्यूब प्रयोगकर्ताहरु 2021 मा विश्वव्यापी छन्? १%% मानिसहरु यूट्यूब को उपयोग विशेष गरी कम्पनीहरु र ब्रान्डहरु लाई पछ्याउन को लागी।
यी तथ्या statistics्कले यो स्पष्ट रूप मा स्पष्ट छ कि यदि तपाइँ एक ब्यापार मालिक को रूप मा यूट्यूब को शक्ति को उपयोग गरीरहनुभएको छैन, तपाइँ एक धेरै बाहिर गुमाउँदै हुनुहुन्छ! भिडियो सामग्री भविष्य हो। यो सहजै तपाइँको पहुँच विस्तार र ब्रान्ड जागरूकता निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तर यस्तो कट गला प्रतियोगिता संग, तपाइँ कसरी सजीलो पहुँच योग्य भिडियो सामग्री को विशाल सागर बाट बाहिर खडा हुनुहुन्छ?
यस ब्लग मा, हामी 15 उपयोगी सुझावहरु र युक्तिहरु नि: शुल्क यूट्यूब सब्सक्राइबरहरु लाई जुटाउन को लागी तपाइँको ब्यापार लाई अर्को स्तरमा पुर्‍याउनको लागी राउन्डअप गरेका छौं। सिधै भित्र डुब्नुहोस्!
1. तपाइँको दर्शक सदस्यता को लागी अनुरोध गर्नुहोस्
क्लिचको रूपमा यो जस्तो लाग्न सक्छ, केवल तपाइँको दर्शकहरुलाई तपाइँको च्यानल को सदस्यता लिन को लागी प्रोत्साहित गर्न को लागी कहिलेकाहिँ यो नि: शुल्क यूट्यूब ग्राहकहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी सबै हुन सक्छ। यो एकदम मिल्दोजुल्दो छ कि तपाइँ कसरी तपाइँको ब्लग पोष्टहरु, ल्यान्डि pages पृष्ठहरु वा अन्य सामाजिक मिडिया पोष्टहरु को अन्त्य तिर CTAs (कल गर्न को लागी) लाई कल गर्नुहोस्।
उदाहरण को लागी, तपाइँ तपाइँको दर्शकहरुलाई तपाइँको च्यानल को सदस्यता लिन को लागी सोधेर यदि तपाइँ लगातार तपाइँ बाट अधिक सामग्री हेर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँको भिडियो शुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ एक सदस्यता को लागी सोधेर एक भिडियो शुरू गर्न सोच्नुहुन्छ तपाइँ बिक्री- y को रूप मा भर मा आउनुहुन्छ, तपाइँ भिडियो को अन्त्य मा त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। प्रदर्शन गर्न को लागी नबिर्सनुहोस् किन तपाइँको च्यानल को सदस्यता को लायक छ र सामग्री तपाइँ तपाइँको दर्शक को लाभ को लागी टेबल मा ल्याउनुहुन्छ। साँचो हुनुहोस् र उनीहरुलाई देखाउनुहोस् कि उनीहरुको सगाई को मतलब के हो र यो कसरी तपाइँ एक निर्माता को रूप मा सबै भन्दा राम्रो सामग्री बनाउन मद्दत गर्दछ।
१. बाध्यकारी सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
यो एक no-brainer जस्तै लाग्न सक्छ तर अझै पनी उल्लेख गर्न को लागी आवश्यक छ। धेरै धेरै नौसिखिया यूट्यूब निर्माताहरु लाई लाग्छ कि उनीहरु औसत सामग्री पोस्ट गरेर अर्को ठूलो यूट्यूब सनसनी बन्न सक्छन्। समाचार फ्लैश: तपाइँ सक्नुहुन्न! इन्टरनेट भिडियो र सबै प्रकार को सामग्री संग बाढी छ। छनौट गर्न को लागी धेरै विकल्पहरु संग, तपाइँ तपाइँको दर्शकहरु लाई तपाइँको च्यानल हेर्न को लागी र यसको सदस्यता को लागी केहि अनूठा प्रस्ताव गर्न सक्षम हुनु पर्छ। यदि होईन, उनीहरु लाई सधैं अर्को उत्तम च्यानल मा सार्न को लागी एक विकल्प छ।
तपाइँ तपाइँको अर्को भिडियो बनाउन को बारे मा सोच्नु भन्दा पहिले व्यापक आधार कार्य गर्न सम्झनुहोस्। बरु तपाइँको उद्योग मा अरु कोहि बनाइरहनु भएको छ, बक्स को बाहिर सोच्नुहोस् र तपाइँको अद्वितीय सामग्री विचारहरु संग आउनुहोस्। तपाइँको भिडियो को पहिलो १० सेकेन्ड को लागी विशेष ध्यान दिनुहोस् किनकि उनीहरु या त तपाइँको दर्शकहरुलाई लुकाउन वा बन्द गर्न सक्छन्।
आफैलाई सोध्नुहोस्। तपाइँ बरु कुन च्यानलको सदस्यता लिनु हुन्छ? एक कि एक महिना मा एक पटक मात्र AWOL जाने पोस्ट? वा, अर्को च्यानल हो कि हप्ता मा दुई पटक लगातार पोस्ट? हामी सबै उत्तर जान्दछौं - हामी एक छनौट गर्दछौं जो नियमित रूपमा उनीहरुको दर्शकहरु को लागी नयाँ सामग्री संग आफ्नो च्यानल अपडेट गरीरहेका छन्। एक सृष्टिकर्ता को रूप मा, तपाइँको दर्शकहरु लाई तपाइँ समय मा पोस्ट गर्न को लागी उनीहरु लाई व्यस्त राख्न को लागी र नयाँ दर्शकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी अपेक्षा गर्दछ। अधिक नि: शुल्क यूट्यूब ग्राहकहरु, अधिक नि: शुल्क यूट्यूब मनपर्छ तपाइँ लाभ। जित-जीत!
तपाइँको सामग्री पोस्ट गर्न को लागी एक कार्यक्रम को लागी तपाइँ संगठित र उपज परिणामहरु राख्नुहुन्छ। तपाइँ लाई जरूरी छैन एक कम्प्यूटर को अगाडि बस्न को लागी लाइभ र यो पोस्ट गर्न को लागी। तपाइँ सोशल मिडिया प्रबन्धन उपकरणहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको भिडियो अनुसूची गर्न को लागी अनुमति दिन सक्नुहुन्छ कि पछि प्रकाशित गर्न सकिन्छ।
४. अन्य प्लेटफार्महरु भर मा तपाइँको YouTube च्यानल को प्रचार
यदि तपाइँ पहिले नै एक वेबसाइट छ, एक महान YouTube प्रयोगकर्ताहरु लाई नि: शुल्क प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको वेबसाइट मा लगातार यातायात को लाभ उठाएर हो। तपाइँको वेबसाइट मा तपाइँको YouTube च्यानल को प्रचार गर्नुहोस्। यदि तपाइँ सही प्लगइन प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँका दर्शकहरु सजिलै संग एक बटन मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको सामग्री हेर्न को लागी तपाइँको यूट्यूब पृष्ठमा निर्देशित हुन सक्नुहुन्छ। तपाइँ पनी तपाइँको ब्लग पोष्टहरुमा तपाइँको यूट्यूब लि emb्क एम्बेड गर्न को लागी तपाइँको पाठकहरु लाई पेज मा जान को लागी लुकाउन सक्नुहुन्छ।
अर्को महान् चाल अन्य YouTube मिडिया प्लेटफर्महरु जस्तै Twitter, Facebook, Instagram र LinkedIn मा तपाइँको YouTube च्यानल को क्रस-प्रचार गरेर हो। जब तपाइँ एक नयाँ भिडियो आउँदैछ, तपाइँ ट्रेलर वा प्रक्षेपण निर्माण गर्न को लागी तपाइँको इन्स्टाग्राम कहानी मा यसको टुक्राहरु साझा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यी प्लेटफार्महरु मा एक सभ्य अनुयायी गणना amassed छ, र उनीहरु तपाइँ के गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ, यो मात्र समय को एक कुरा हुनेछ उनीहरु तपाइँको लामो समय को ग्राहक बन्नु भन्दा पहिले।
5. तपाइँको भिडियो मा एक वाटरमार्क जोड्नुहोस्
यूट्यूब मा सामग्री सिर्जनाकर्ताहरु उनीहरु को सबै भिडियोहरु को लागी एक सानो वाटरमार्क थप्न सक्छन्। धेरै पटक शुरुवात सामग्री निर्माताहरु लाई पनी थाहा छैन वाटरमार्क विकल्प प्लेटफर्म मा अवस्थित छ। यो एक सानो प्रतिमा हो कि तपाइँको भिडियो को तल्लो दाहिने हात कुनामा होवर। तपाइँ या त यो तपाइँको ब्रान्ड वाटरमार्क अनुकूलित वा एक वाटरमार्क कि YouTube को पूर्वनिर्धारित सदस्यता बटन जस्तो देखिन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
दुर्भाग्यवश, धेरै पटक ब्रान्ड वाटरमार्क अनजानमा जान सक्छ वा दर्शकहरुलाई कुनै पनि कार्य गर्न को लागी संकेत गर्न सक्दैन। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाइँ रातो सदस्यता बटनमा रहनुहोस् कि YouTube सामान्यतया प्रयोग गर्दछ। यो सजीलो दर्शकहरु को लागी नोटिस गर्न को लागी बनाउँछ, र उनीहरु लाई यो मा क्लिक गर्न को लागी अधिक संभावना छ। जे होस्, यदि तपाइँ अझै पनी अनुकूलन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ मेनुमा अनुकूलन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि ब्रान्डि select चयन गर्नुहोस्।
What's. अर्को के आउँदैछ भन्ने एक झलक दिनुहोस्
नि: शुल्क यूट्यूब ग्राहकहरु प्राप्त गर्न को लागी एक उत्कृष्ट तरीका हो तपाइँको दर्शकहरु लाई उत्साहित र तपाइँले बनाउनु भएको सामग्री को आदी हो। किनभने, एक पटक उनीहरु के देख्छन् उनीहरुलाई मन पर्छ, तपाइँको काम सबै कुरा गरीरहेछ, र उनीहरु धेरै को लागी वरिपरि रहनेछन्। एक स्मार्ट प्रविधि सबैभन्दा स्थापित यूट्यूब निर्माताहरु आफ्नो दर्शकहरु लाई व्यस्त राख्न को लागी तैनात गरीएको छ कि उनीहरुको अर्को भिडियो को लागी प्रत्याशा को निर्माण गरेर।
एक नयाँ संगीत भिडियो, एक नयाँ उत्पादन प्रक्षेपण, तपाइँको उत्पादन को लागी एक नयाँ सुविधा, एक नयाँ सेवा, वा एक प्रसिद्ध स्टार संग एक आश्चर्य को सहयोग! जे होस् यो होस्, तपाइँको दर्शकहरुलाई तपाइँको अर्को भिडियो के बारे मा हुन गइरहेको छ भन्ने संकेत दिएर मोहित गर्न को लागी याद गर्नुहोस्। यदि तपाइँ आफ्नो काम धेरै राम्रो संग गर्नुहुन्छ, तपाइँ पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँको वफादार दर्शकहरु bated सास संग अर्को भिडियो हेर्न को लागी उपस्थित हुनेछन् र तपाइँलाई नि: शुल्क YouTube लाईक दिन को लागी।
7. तपाइँका दर्शकहरु हुक राख्न प्लेलिस्ट बनाउनुहोस्
के तपाइँसँग एक प्लेलिस्ट संग राम्रो संगठित गर्न सकिन्छ कि भिडियो को एक सेट छ? सायद तपाइँ लेखा पाठ प्रस्तुत र एक भिडियो मा एक विषय प्रत्येक कभर। वा, तपाइँ webinars को एक सेट छ? जे होस् यो हुन सक्छ, प्लेसूचीहरु तपाइँ तपाइँको दर्शकहरु लाई तपाइँको सामग्री मा निरन्तरता देखाइरहनुभएको छ अगाडि तपाइँको सबैभन्दा राम्रो खुट्टा राख्न को लागी अनुमति दिन्छ। एक प्लेसूची सिर्जना गरेर, तपाइँ उनीहरुलाई एक लामो अवधिको यात्रा को माध्यम बाट मार्गदर्शन र दर्शक को binge को इच्छा को अपील।
प्लेलिस्ट को अर्को लाभ यो हो कि उनीहरु तपाइँको च्यानल को हेर्ने समय बढाउँछन्। भिडियो एक पूर्वनिर्धारित क्रम मा 'AutoPlay' मोड मा खेलिरहन्छ। यो एकदम मिल्दोजुल्दो छ कि कसरी सहस्राब्दी पुस्ता एक Netflix श्रृंखला को लागी हुक गर्न को लागी जान्छ। एक यूट्यूब प्लेलिस्ट संग, तपाइँ उही द्वि घातुमान इच्छा र नतिजा प्राप्त गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ, तपाइँको च्यानललाई धेरै कारणहरु सित्तैमा यूट्यूब लाईक मनपर्छ।
8. कार्ड र अन्त्य स्क्रीन को उपयोग अन्य भिडियो को प्रचार गर्न को लागी
अन्त स्क्रीन र कार्डहरु शक्तिशाली उपकरणहरु छन् कि कार्य को लागी तपाइँको कल लाई अधिक प्रभावशाली बनाउँछ। नाम को रूप मा सुझाव छ, एक अन्त्य स्क्रिन एक छवि हो जुन तपाइँको भिडियो को अन्त्य मा आउँछ जुन तपाइँको दर्शकहरु लाई सदस्यता लिन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। वा, तपाइँ यसलाई तपाइँको वेबसाइट को प्रचार गर्न को लागी वा अर्को भिडियो को लागी तपाइँको दर्शकहरु लाई संकेत गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ, तपाइँ फिर्ता जान सक्नुहुन्छ र पुरानो भिडियोहरु लाई पहिले नै तपाइँको च्यानल मा पोस्ट गरीएको छ कि पर्दाहरु लाई जोड्न सक्नुहुन्छ। यो नि: शुल्क यूट्यूब ग्राहकहरु कमाउन र नि: शुल्क यूट्यूब लाइक बढाउन को लागी एक महान तरीका हो।
एक अन्त्य स्क्रिन थप्न को लागी, बस सृष्टिकर्ता स्टुडियो को बायाँ मेनू मा जानुहोस् र सामग्री मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँ अन्तिम स्क्रीन थप्न चाहानुहुन्छ भिडियो छान्नुहोस्। स्क्रिनको दाहिने छेउमा देखा पर्ने अन्तिम स्क्रिन बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँ तब तपाइँको लक्ष्य मा आधारित चार फरक सदस्यता तत्वहरु बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
9. तपाइँको दर्शकहरु संग अन्तरक्रिया गर्न नबिर्सनुहोस्
नि: शुल्क यूट्यूब लाइक प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको भाग मा लगातार प्रयास को आवश्यकता छ। यो सजीलो नयाँ दर्शकहरु जित्न प्रतियोगिता आज हामी देखीएको छैन। एक स्मार्ट तरीका यो वरपर काम गर्न को लागी तपाइँको अवस्थित दर्शकहरु लाई समान ध्यान दिएर छ। उनीहरुलाई मूल्यवान महसुस गर्न को लागी अनुमति दिनुहोस् र तपाइँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ कि तपाइँलाई मद्दत गर्न को लागी सराहना गरियो। तपाइँको पोस्ट मा उनीहरु संग संलग्न। उनीहरुको टिप्पणीलाई जवाफ दिनुहोस्। जान्नुहोस् कि उनीहरुलाई के मन पर्छ वा तपाइँको भिडियो को बारे मा मन पर्दैन।
जब तपाइँ तपाइँको दर्शकहरु संग यस्तो सार्थक सम्बन्ध बनाउनुहुन्छ, यो लामो अवधिको वफादारी को लागी अनुवाद गर्दछ। जब तपाइँ उनीहरुका सुझावहरु सुन्नुहुन्छ र उनीहरु मा कार्य गर्नुहुन्छ, उनीहरु सुनेको महसुस गर्छन् र तपाइँको सामग्री संग अधिक सम्बन्धित छन्। याद गर्नुहोस्, खुसी दर्शकहरु शब्द को मुख बाट प्रचार र साथीहरु को आफ्नो सर्कल संग तपाइँको सामग्री साझा गरेर अधिक दर्शकहरु लाई ल्याउन सक्छन्।
10. च्यानल ट्रेलरहरु लाई तपाइँको दर्शकहरुलाई लुकाउन को लागी विचार गर्नुहोस्
तपाइँको नयाँ दर्शकहरु लाई थाहा छ कि तपाइँको YouTube च्यानल को बारे मा सबै एक सरल र छिटो तरीका मा जान्न चाहानुहुन्छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् - च्यानल ट्रेलर। यी फिल्म ट्रेलर जस्तै हो कि तपाइँ के गर्नुहुन्छ र तपाइँ तपाइँको दर्शकहरु को लागी बनाउनु भएको सामग्री मा एक चुपचाप चोटी दिन्छन्। तपाइँ च्यानल ट्रेलरहरु लाई तपाइँको च्यानल को लाभहरु लाई हाइलाइट गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 25 र 30 सेकेन्ड को बीच लम्बाइ राख्न सम्झनुहोस्।
ट्रेलर तपाइँको ब्रान्ड को कहानी, तपाइँको महत्वाकांक्षाहरु र तपाइँ च्यानल को माध्यम बाट हासिल गर्न को लागी योजना बताउन सक्नुहुन्छ। के यो प्रेरणादायक, हास्यास्पद वा भावनात्मक रूपमा चार्ज हुन आवश्यक छ? जो पनी तपाइँको लागी काम गर्दछ र तपाइँको काम को लाइन संग सहमत हुनुहुन्छ। यो प्रभावशाली बनाउन ताकि दर्शकहरु सजीलै संग ग्राहकहरु मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
11. आँखा को लागी कस्टम थम्बनेल बनाउनुहोस्
एक थम्बनेल एक पूर्वावलोकन छवि हो कि तपाइँको भिडियो को लागी एक आवरण को रूप मा कार्य गर्दछ। यो पहिलो कुरा हो एक दर्शक मा देखीन्छ जब उनीहरु तपाइँको पृष्ठ मा आउँछन्। हामी सबैलाई थाहा छ, पहिलो छापहरु अन्तिम छापहरु हुन्। त्यसोभए, एक आँखा हान्ने थम्बनेल बनाउन को लागी तपाइँको सबै प्रयासहरु मा राख्नुहोस् कि संलग्न भन्दा बाहिर छ। अक्सर, तपाइँको भिडियो को थम्बनेल एक निर्णायक कारक बन्छ कि एक दर्शक तपाइँको भिडियो खेल्न को लागी छनौट गर्दछ वा खोज परिणाम बाट अर्को एक।
यूट्यूबले यो बाट एक अनियमित स्क्रिनसट मात्र snagging द्वारा भिडियो को लागी एक पूर्वनिर्धारित थम्बनेल सिर्जना गर्दछ। धेरै जसो केसहरुमा, यो पर्याप्त राम्रो छैन तपाइँको भिडियो को लागी ट्राफिक ड्राइभ गर्न को लागी र दर्शक लाई क्लिक गर्न को लागी संकेत गर्नुहोस्। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाइँ तपाइँको थम्बनेल सिर्जना गर्नुहोस्। यो १२1280० x p२०px हुन दिनुहोस् यूट्यूब को दिशानिर्देशहरु को सिफारिश को रूप मा।
प्रो सुझाव: एक मुस्कुराउने अनुहार सीधा क्यामेरा मा हेर्दै लगभग हरेक भिडियो प्रकार को लागी लगभग सबै समय को लागी लाग्छ।
१२. दर्शकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस् यदि उनीहरु तपाइँको च्यानलको सदस्यता लिन्छन्
हामी मानिसहरु लाई मुक्त सामान मन पर्छ। 'यसमा मेरो लागि के छ?' यो कारण बन्छ कहिलेकाहीँ हामी किन वा केहि गर्न सक्दैनौं। अचम्मको कुरा, यो तपाइँको YouTube दृश्यहरु लाई बढाउन को लागी एक आकर्षण जस्तै काम गर्दछ। तपाइँको नि: शुल्क यूट्यूब लाईक लाई बढाउन चाहानुहुन्छ वा तपाइँको पोस्ट मा अधिक मान्छे टिप्पणी छ? एक बुद्धिमान तरीका एक प्रतियोगिता चलाउन को लागी हो। तपाइँका दर्शकहरुलाई भन्नुहोस् यदि उनीहरु तपाइँको च्यानल को सदस्यता लिन्छन् र तपाइँको पोस्ट मा टिप्पणी गर्दछन्, उनीहरु एक नि: शुल्क उत्पादन पाउँछन्। वा, तपाइँको किताब को एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि, वा तपाइँको सफ्टवेयर को एक नि: शुल्क परीक्षण। ड्रिल पाउनुहोस्?
जब तपाइँ तपाइँको यूट्यूब च्यानल संग संलग्न को लागी पुरस्कार परिचय तपाइँ तपाइँको ग्राहक संख्या मा एक समग्र संलग्नता मा एक अस्थायी वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ। एकपटक तपाइँ उनीहरुको ध्यान छ, उनीहरुलाई लगातार बाध्यकारी सामग्री संग आकर्षित, तेसैले उनीहरु जीवन को लागी तपाइँको दर्शक बन्नुहोस्।
13. नि: शुल्क YouTube लाईक बढाउन अन्य रचनाकारहरु संग सहयोग गर्नुहोस्
यूट्यूब मा सम्भवतः ब्रान्डहरु छन् कि तपाइँ जस्तै व्यापार मा छन्। यो पनी धेरै सम्भव छ कि तपाइँ एक समान दर्शकहरु हुन सक्छ। किन हात मिलाएर र एक अर्का बाट लाभ उठाएर एक अर्काको दर्शक लाई लाभान्वित गर्दैनन्? उदाहरण को लागी, तपाइँ तपाइँको क्षेत्र मा एक विशेषज्ञ लाई तपाइँको च्यानल मा तपाइँ संग एक साक्षात्कार गर्न को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँको प्रशंसकहरुलाई तपाइँको च्यानलमा ल्याउन र तपाइँको ग्राहक आधार बढाउन मद्दत गर्दछ। यसको साथसाथै, तपाइँका दर्शकहरु जो विशेषज्ञ को बारे मा सचेत थिएनन् उनीहरुको च्यानल को सदस्यता लिन सक्छन् साथै यदि सामग्री उनीहरु संग अनुनाद छ।
तपाइँको च्यानल को लागी अधिक eyeballs हान्न को लागी प्रभावकारिताहरु संग सहयोग शायद मार्केटि book किताब मा सबैभन्दा पुरानो चाल हो र अझै सम्म यसको जादू काम गर्न असफल। जब तपाइँका दर्शकहरु यस्तो सहयोग देख्छन्, यो थप उनीहरुको दिमाग मा अधिक सिफारिशहरु वा विचारहरु ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरु तपाइँको पोस्ट मा टिप्पणी गर्न सक्छन् र तपाइँ बताउन सक्नुहुन्छ कि अन्य कलाकारहरु जो उनीहरु संग सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
खोज इन्जिन अनुकूलन सुनिश्चित गर्दछ कि मानिसहरु तपाइँको सामग्री हेर्न सक्छन् जब उनीहरु केहि कीवर्ड को उपयोग गरी यसको लागी खोज्न सक्छन्। उदाहरण को लागी, तपाइँ YouTube मा एक खाना पकाउने च्यानल छ। तपाइँ ग्रील्ड स्यान्डविच मा एक भिडियो बनाउनुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको शीर्षक, वर्णन र प्रासंगिक हैशटैग को उपयोग गर्नुहुन्न भने कसरी मानिसहरु त्यो भिडियो भेट्टाउनेछन्? एसईओ उपकरणहरु जस्तै गुगल प्लानर तपाइँ शीर्षतम कीवर्डहरु जान्न को लागी अनुमति दिन्छन् कि मानिसहरु केहि जानकारी खोज्न को लागी प्रयोग गर्दछन्।
यूट्यूब एसईओ सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ एक बिषय मा एक भिडियो बनाउनुहुन्न कि कसैले खोजिरहेको छैन। वा शीर्षक जो कोहि पाउन सक्दैनन्। यदि तपाइँ पक्का हुनुहुन्न कि कसरी अनलाइन उपकरणहरु को उपयोग गरी सही कीवर्ड्स खोज्न को लागी, तपाइँको प्रतियोगी को च्यानल को अध्ययन र अवलोकन गर्नुहोस् कि कीवर्डहरु लाई काम गर्न को लागी लाग्छ। तपाइँ यूट्यूब एनालिटिक्स को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि कीवर्ड्स तपाइँलाई सबै भन्दा राम्रो नतिजा दिन्छ।
15. YouTube लाइभ प्रयास गर्नुहोस्
लाइभ भिडियोहरु एक प्रवृत्ति हो कि यहाँ रहन को लागी बनेको छ। इन्स्टाग्राम र फेसबुक जस्ता अनुप्रयोगहरु को एक बढ्दो संख्या यो सुविधा हो जुन यो ब्रान्ड को लागी बोर्ड मा प्राप्त गर्न को लागी सजिलो बनाइरहेको छ। रोचक प्रश्नोत्तर सत्रहरु र वेबिनारहरु बाट प्रत्यक्ष ट्यूटोरियल र उत्पादन प्रदर्शन सम्म, त्यहाँ अनगिन्ती चीजहरु छन् जुन तपाइँ एक YouTube लाइभ मा अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ नि: शुल्क YouTube ग्राहकहरु लाई प्राप्त गर्न।
सगाई स्तर र ब्रान्ड जागरूकता कि तपाइँ एक प्रत्यक्ष सत्र मा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ अद्वितीय रहनुहोस्। चाहे यो प्रत्यक्ष भिडियो को कच्चा र जैविक भावना हो वा अनिश्चितता र के हुन लागेको छ को उत्साह हो, प्रत्यक्ष स्ट्रिमि trying कोसिस लायक छ। तपाइँ लाइभ हुनु भन्दा पहिले, उचित गियर र प्रकाश मा लगानी गर्न को लागी याद गर्नुहोस् ताकि तपाइँको भिडियो अधिक पेशेवर देखिन्छ।
हामी आशा गर्दछौं कि माथिका सुझावहरु तपाइँको च्यानल मा तपाइँको ब्रान्ड को प्रचार गर्न र नि: शुल्क यूट्यूब सब्सक्राइबर प्राप्त गर्न को लागी उपयोगी हुन सक्छ। याद गर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै एक आकार फिट सबै भिडियो मार्केटि approach को लागी दृष्टिकोण छ। यो एक सिक्न को रूप मा तपाइँ जाने प्रक्रिया हो जहाँ तपाइँ बिस्तारै जान्नुहुन्छ के तपाइँ को लागी काम गर्दछ र के गर्दैन। रोचक सामग्री बनाउन को लागी लक्ष्य र यो लगातार एक वफादार ग्राहक आधार निर्माण गर्न को लागी पोस्ट गर्नुहोस्। एक प्लेलिस्ट मा एउटै सेट को स्ट्रिंग भिडियो निरन्तरता को सुविधा को लागी। तपाइँको भिडियो शीर्षक, वर्णन अनुकूलन गर्न को लागी ध्यान दिनुहोस् र ह्यासट्याग को उपयोग गर्नुहोस् कि तपाइँको भिडियो सामग्री को लागी अधिक मान्छे लाई आकर्षित गर्न सक्छ।
यदि यूट्यूब मार्केटि you तपाइँलाई धेरै भारी लाग्छ र तपाइँलाई पेशेवर मद्दत चाहिन्छ, हामी, YTpals मा, तपाइँको सेवा मा छौं। हामी सबै भन्दा राम्रो एसईओ समाधान र उद्योग प्रमाणित प्रविधिहरु को उपयोग गरेर तपाइँको ग्राहकहरु लाई बढाएर तपाइँलाई नि: शुल्क यूट्यूब लाईक प्राप्त गर्न को लागी उपकरण र विशेषज्ञता छ।
तपाइँको सबै YouTube मार्केटि needs आवश्यकताहरु को लागी हामी संग सम्पर्क मा रहनुहोस्। विशेषज्ञहरु को हाम्रो मैत्री टीम तपाइँको ब्यापारिक आवश्यकताहरु को बारे मा जान्न को लागी खुसी हुनेछ र दर्जी बनेको समाधान हो कि तपाइँको आवश्यकताहरु को लागी सबैभन्दा उपयुक्त छ।
XNUM Xth 6
YouTube सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले दर्शकहरूको ध्यान खिच्न असंख्य अन्य सिर्जनाकर्ताहरूसँग विवाद गर्छन्। नि:शुल्क YouTube साझेदारी र नि:शुल्क YouTube टिप्पणीहरू गार्न गाह्रो हुन सक्छ।
25th मई 2022
YouTube सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई एक-अप गर्न र उनीहरूको YouTube रैंकिंग सुधार गर्न तिनीहरूको SEO रणनीतिमा काम गर्छन्। भिडियोहरू श्रेणीकरण गर्दा, YouTube एल्गोरिदमले दर्शकहरूलाई पनि लिन्छ ...
16th मई 2022
भिडियो सामग्रीको संलग्नता र रूपान्तरण शक्तिको लाभ उठाएर, तपाईंले YouTube मा अपार ब्रान्ड मार्केटिङ क्षमता अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो ठूलो सर्च इन्जिन भएकोले गुगलको स्वामित्वमा रहेको...
तल द्रुत अर्डर फारम प्रयोग गर्नुहोस्
मैले मेरो च्यानलको लागि YouTube दृश्यहरू, मनपराउनेहरू र सदस्यताहरूलाई खरिद गरें र उनीहरूले केहि बोनस निःशुल्क निःशुल्क प्रदान गरे! म अधिक र अधिक YTPals प्रयोग गर्दैछु!
धेरै धेरै YTPals धन्यबाद
धन्यबाद YTPals, म तपाईंलाई १० तारे दिन चाहन्छु। म तपाइँ सबैलाई माया गर्छु, र तपाइँले गर्नु भएको शानदार काम।
एक दोस्रो शंका छैन!
YTPals, तपाईको मद्दतको लागि धेरै धन्यवाद, तपाईंले मेरो च्यानललाई तीन गुणा ठूलो बनाउनु भयो जब यो तपाईंको फ्रि सक्रियता सुरु गरेको थियो। म केवल केही हप्तामा १०० सब्सकट भन्दा 100०० भन्दा बढीमा जान्छु!
तपाईं के लागि पर्खँदै हुनुहुन्छ?
हाम्रो YouTube च्यानललाई बढ्न मद्दत गर्न नि: शुल्क YouTube ग्राहकहरू प्राप्त गरिरहेका YouTube००,००० भन्दा बढी सफल यूट्यूब च्यानल मालिकहरूको हाम्रो नेटवर्कमा सहभागी हुनुहोस्।
अब नि: शुल्क सदस्यता लिनुहोस्!